Kuwa ku shaqeeya tamarta casriga kuleyliyaha iyo tamarta la cusboonaysiin karo ee Cornwall iyo Devon
Yeelashada guriga oo bilaash ah
Hadda naga soo wac si aad nooga weydiiso deeqdeena loogu talagalay daboolka daboolka iyo qalabka godadka daboolka 0800 0 246
Ma dooneysaa Boorso BILAASH ah?
Haddii aad qaadato lacagta daqliga ee la xiriira daqliga, waxaad xaq u yeelan kartaa deeqda si aad u bedesho boorsadaada. Hadda ka wac 0800 0 246234
Wax dheeri ah baroHadda ka bacdi
Maqee waxa ay macaamiishayadu leeyihiin
Waxa keliya oo aad doonaysay in aad u mahadcelisid dadaalkaaga oo dhan si aad u hesho Gargaarka si loo cusboonaysiiyo nidaamkayaga kuleylinta iyo qabashada shaqada. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku ammaano kooxda aad noo soo dirtay arbacadii, Ryan, Bryan iyo Galvin. Dhammaantood waxay ka shaqeynayeen suuqu oo waxay ku raaxaysteen inay ku yaallaan Bungalow. Dammaanadda Tamarta Ku-meel-gaadhka ah sida Karla oo weyn. Waad ku mahadsan tahay.
- Qalabaynta - Kiimikada Boostada - Pensilva
Adeegga macaamiisha ee joogsi kasta wuxuu ahaa mid aad u fiican, oo ka hadlayay adeegga macaamiisha taleefanka, qofka booqday si uu u qiimeeyo ku habboonaanta (oo ahaa mid aad u aqoon iyo caawimaad), qofka u booqday si uu u buuxiyo codsiga maaliyadda iyo rakibayaashuba waxay ahaayeen kuwo fantastik ah .
Kaliya ayaa rabay in aad u mahadcelisid qof walba oo ku jira Energy Energy wixii caawimaad iyo khibrad ah ee ku saabsan rakibidda qalabka kuleyliyaha. Waa maxay koox aad u fiican oo aad tahay.
- Debbie - Ku rakibidda kuleyliyaha - Redruth
Nidaamkani wuxuu ahaa mid aad u xirfad leh oo dhaqso badan. Brian wuxuu yimid waqtigii iyo taariikhda la sheegay oo si joogto ah ugu shaqeeyey heer aad u sarreeya. Dhammaanteen waxaynu aad ugu faraxsanahay Energy Energy.
- Jackie - Loft Insulin - Perranporth
Kuleylku si fiican ayuu u shaqeynayaa, noloshayduna way bedeshay. Weligay marnaba kuleyliye ayaa si fiican u shaqeynaya sanadaha 17 waxaan ku jirey guriga. Kooxdu waxay timid waqtigii la ii sheegay inay doonayaan iyo in la rakibo wakhtigii loo qabtay.
Jon ayaa sharaxay waxa ay qabanayaan oo ay u diri lahaayeen daqiiqado wanaagsan 45 ka dib markii la rakibay sharaxaadda sida wax walba u shaqeeyaan oo waydiisteen haddii aan wax su'aalo ah ka qabay nidaamka iyo xakamaynta.
- Alicia - Ku rakibidda Kuleylka - Gaariga
Laga soo bilaabo telefoonkii bilowga ahaa markii shaqada la dhameeyey oo dhan kooxda Happy Energy ayaa ahaa mid saaxiibtinimo, niyad wanaag iyo waxtar leh. Adeeggooda macaamiisha ayaa ah kuwa labaad. Si buuxda ayaa loo ogeysiiyey marxalad kasta oo ka mid ah geeddi-socodka iyo su'aalahayga si degdeg ah ayaa looga jawaabay.
Aad ayaan ugu faraxsanahay waayo-aragnimadayda "Energy Energy" waayo waxaan kugula talin lahaa qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Xaqiiqdii waxaan isticmaali doonaa Tamarta Tamarta ee dhammaan baahida tamarta mustaqbalka.
Waxaan warqad u qoray si aan ugu mahadceliyo ku rakibidda kuleylka dhexe. Waxay u shaqeysaa si fantastik ah. Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa in aan ku ammaano injineeriyeyaashii ku rakibay. Waa inaan qiranaa inaanan sugeynin shaqada la qabanayo laakiin kooxda aad soo dirtay ayaa ka dhigay farxad buuxda.
Waxaa la ii tashaday dhinac kasta, waxay dhab ahaantii raaceen maylka dheeraadka ah si ay u noqdaan wax yar oo carqalad ah oo suurtagal ah oo maalin kasta la nadiifiyo. Waxaan dareemay kalsoonida kalsoonida kalsoonida, kalsoonida iyo xirfad farsamo.
Ma ammaani kartid shaqada iyo tixgelinta kooxdaada ku filan. Waxaan kugula talin lahaa shirkaddaada inay ku fekeraan in kuleylka dhexe lagu rakibo midka ugu sarreeya.
- Suzi - Qalabka kuleylka ee Central - Newlyn
Adeeg weyn, koox aad u xirfad leh, ayaa kugula talin lahaa qof walba
Waad ku mahadsantihiin kooxda oo dhan wixii caawimo ah ee aad igu siisey boorsaashayda bilaashka ah iyo in ay igu habboontahay.
- Irene - Ku-rakibid Cusbiil cusub - Helston
Kaliya in la yidhaahdo aad u weyn ayaad u mahadcelineysaa Energy Energy iyo kooxdooda shaqo ee weyn. Waxaan kululeynaa markii ugu horeysay ee ku dhowaad 12 sano !!
- Mr iyo Mrs Lane - Nidaamka kuleylka ee Central - Cornwall
Qoyska Cornish-ka ah oo aan ka maqan Tamarta bilaashka kaydinta
Video of ECO LA U-qalmitaanka Ficilka ee ficilka @SpelthorneSt degaanka council ee Surrey @beisgovuk @ALEOsecretariat www.youtube.com/watch?v=YNBGdK...
Ku soo biir warside